By Kudzai Chingwe July 21, 2017 | HARARE, Zimbabwe (UMNS)
The wining soccer team from the Domboramwari Circuit pose with their trophy during a sports gala held at Selborne Routledge Primary School in Harare. The two United Methodist conferences in Zimbabwe competed in a sports event aimed at promoting exercise for health. Photo by Kudzai Chingwe, UMNS.
Women in the over 60s division line up for a race at a sports gala at Selborne Routledge Primary School in Harare, sponsored by the Zimbabwe Episcopal Area women’s organization, RukwadzanoRweWadzimai, to promote exercise for health. Tendai Gurupira, vice president of RukwadzanoRweWadzimai, said exercising is a cheaper and safer alternative to pharmaceutical medicine. Photo by Kudzai Chingwe, UMNS.
Opposing teams rush for the ball in the final soccer match between the Domboramwari Circuit team and the Harare West District Team at Selborne Routledge Primary School in Harare, Zimababwe. The match was part of a sports event sponsored by Zimbabwe Episcopal Area women’s organization, RukwadzanoRweWadzimai. Photo by Kudzai Chingwe, UMNS.